Collapse OS, iyo post-apocalypse inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kushanda nezviri nyore-kudzoreredza zvinhu | Kubva kuLinux
Collapse OS, iyo post-apocalypse inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kushanda nezviri nyore-kudzoreredza zvinhu
Collapse OS iyi nyowani yekushandisa system open source yakagadzirirwa zvakananga kune yakasviba mazuva emunhu. Zvichava saizvozvo inokwanisa kushanda nezvinhu zviri kwese kwese uye nyore kupora mukutarisira ramangwana reapocalyptic uko zvemagetsi zvevatengi chinhu chekare, ramangwana apo cheni yepasi rose inowira uye vanhu vasingachakwanise kugadzira zvigadzirwa zvemagetsi zvinoramba zviri simba rezvematongerwo enyika neremagariro.
Zvinoenderana nemugadziri wayo, mugadziri Virgil Dupras, Collapse OS ndizvo izvo izvo vanhu venguva yemberi vachazoda kugadzirisa zvakare izvo zvicharamba zviri zvigadzirwa zvetekinoroji zvazvino. Dupras inoita kunge iri kugovana maonero evaya vanotenda kuti hunhu hwuri kuenda padanho rinorwadza munhoroondo yaro uye kuti mushure menguva yekufungidzira, kunenge kuti vanhu vachakwanisa kushandisa kana kudzora zvirinani tekinoroji yepasirese ichaitwa. mhosva yevezera ravo.
Nezve izvi, akati:
“Ndiri kuita izvi kudzikisira njodzi yandinotenda kuti ndeyechokwadi. Izvo hazvidzivirike, asi izvo zvingangove zvakakwana kutsigira ine mwero kuedza.
Virgil Dupras anotenda kuti dambudziko hombe kune vanhu vanoziva nezve post-apocalyptic tekinoroji ichave microcontroller, iine maseketi akabatanidzwa anounza pamwechete zvakakosha zvemakomputa: processor, ndangariro (ROM ne RAM), zvigadzirwa zvemupendero uye zvinowaniswa-zvinobuda mukati.
Izvo zvakare zvichave zvinogoneka kuvaka muchina ine yakasarudzika dhizaini uye yezvimedu zvikamu zvine yakaderera-tech maturusi.
Tsanangura nezve izvi pawebhusaiti yakatsaurirwa chirongwa ichi:
"Makomputa, mushure memakore makumi maviri, achakundikana zvisingaite uye hatichakwanise kuronga ma microcontroller." Izvo zvakare zvinoita kuti Collapse OS inogona kutangwa pamashini mashoma uye akagadziridzwa michina, kusangana nemagadzirirwo emidziyo (makhibhodi, skrini, mbeva ...), kugadzirisa mameseji faira, kuumbiridza sosi mafaira. kuunganidza kwakasiyana siyana kweMCU neCPU,
Mukuwedzera, chinangwa cheichi chirongwa ndechekuti ive yakazvimiririra sezvazvinogona. Nekopi yeiyi purojekiti, munhu anokwanisa uye akasika munhu anokwanisa kuvaka nekuisa Collapse OS pasina zvekunze zviwanikwa (kureva Internet) pamushini wedhizaini yavo, yakavakwa kubva kuzvikamu zvakadzoserwa neturu-tech maturusi.
Collapse OS yakavakirwa pane z80 kernel uye kuunganidzwa kwezvirongwa, zvinyorwa uye zvishandiso. Inoenderana neZ80 8-bit microprocessors, mupepeti wayo anosimbisa kuti inogona kutomhanyisa paZ80 homebrew komputa, iyo RC2014 uye nedzidziso pane Sega Genesis koni.
Parizvino, chirongwa ichi chinoitirwa paGitHub uye Dupras anofara nekufambira mberi kwayo. Iwe urikutsvaga vanogadzira vanogona kugovera kuchirongwa, asi zvakadaro vachatofanira kusangana nemimwe miitiro:
"Kutora chikamu kunoda chaiyo seti yekuda (tenda mune apocalypse) uye hunyanzvi (zvemagetsi uye z80 kuunganidzwa"
Naiyo Collapse OS ine chinangwa chikuru chekuve nyore uye zvakajairika sezvinobvira, kuve z80 kernel uye muunganidzwa wemapurogiramu, maturusi uye zvinyorwa zvinobvumidza chero munhu kuunganidza anoshanda system anogona:
Mhanya pane mashoma uye akagadziridzwa michina.
Inowanikwa kuburikidza nenzira dzakagadziriswa (serial, keyboard, screen).
Verenga uye nyora kubva kwakasiyana siyana ekuchengetedza maturusi.
Nezve mukova, Dupras inoda kupa iyo sisitimu kugona kubatanidza chero yakagadziriswa keyboard kana mamwe mafomu eakagadziridzwa interface, saka kune rutsigiro rwePS / 2, D-Pad, maadhibhodhi ekhibhodi, nezvimwe.
Kungofanana nehombodo yekutamba neI / O iriko zvekare. Makadhi eSd anotsigirwa, kuzvidzokorora kwave kuitiswa kuitira kugovana zviri nyore (kana paine RAM yakakwana uye yekuchengetedza), uye iyo kernel inogadziriswa zvizere, yakanyorwa semamodhi akasununguka akabatanidzwa pamwechete.
Pasina imwezve ado, iwe unogona kubvunza zvimwe nezve iyo projekiti pane yayo yepamutemo webhusaiti (chinongedzo ichi) kana tarisa kodhi pane github (chinongedzo ichi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Collapse OS, iyo post-apocalypse inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kushanda nezviri nyore-kudzoreredza zvinhu
Minerva: akateedzana ezvinetso muECDSA / EdDSA kuita